K-Pop Idol အဖြစ်အောင်မြင်လာခဲ့ပြီးနောက် မိခင်နိုင်ငံမှာလည်း မထင်မှတ်ထားလောက်အောင် အောင်မြင်လာကြတဲ့ Idol ၁၀ ယောက်
On March 9, 2018 By shwe yi
K-Pop Idol Group တိုင်းမှာ Korea member တွေသာမကပဲ Global Audition တွေမှတစ်ဆင့် နိုင်ငံအသီးသီးက Idol တွေလည်း ပါဝင်လာကြတဲ့အထဲမှာမှ Chinese member တွေကတော့ မပါမဖြစ်ဆိုသလို Idol Group အားလုံးနီးပါးမှာ ပါဝင်လာကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် K-Pop Idol အဖြစ်အောင်မြင်ပြီးနောက် သူတို့ရဲ့ မိခင်နိုင်ငံမှာလည်း မထင်မှတ်ထားလောက်အောင် အောင်မြင်နေကြတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံဖွား K-Pop Idol ၁၀ ယောက်ကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်~
1. Hangeng (Super Junior M)
Super Junior ကိုတော့ Kpoper တိုင်းနီးပါး သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ K-Pop Idol တွေကို Global Idol တွေအဖြစ် စတင်တွေ့မြင်ရအောင် ကနဉီးဖော်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ Idol Group ဆိုရင်လည်းမမှားပါဖူး။ Super Junior M ရဲ့ Leader လည်း ဖြစ်တဲ့ Hangeng ကတော့ Super Junior Member အဖြစ်ကနေ တရုတ်နိုင်ငံတွင်းမှာပါ အောင်မြင်လာခဲ့တဲ့ Idol တစ်ဉီးဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုပြန့်ပွားရေးမှာ တက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့တာမို့ သူ့ရဲ့မိခင်တိုင်းပြည်ဖြစ်တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းမှာ အထူးတလည်အားပေးခြင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်တောင်လည်းဆိုရင် ဘေဂျင်းအိုလံပစ်မှာတုန်းက မီးတိုင်ကိုင်ခဲ့သူဘဝကနေ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွက် နာမည်အကြီးဆုံးအမျိုးသားအဆိုတော်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့အထိပါပဲ။
A post shared by hangeng (@realhangeng) on Dec 3, 2017 at 12:47am PST
2. Kris (EXO)
EXO-M Leader ဖြစ်တဲ့ Kris ကလည်း EXO Member Kris အြဖစ်သာမက နယ်ပယ်အသီးသီးမှာပါ အောင်မြင်တဲ့ Artist တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Topping Forbes ရဲ့ “List of Top Chinese Celebrities” ထဲမှာပါ ပါဝင်လာတဲ့ Kris ကတော့ Asia Media တွေသာမက Western Media တွေကပါ အာရုံစိုက်ခံလာရတဲ့အထိ အောင်မြင်လာခဲ့တဲ့ Artist တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
A post shared by Galaxy Fan (@kriswu) on Feb 16, 2018 at 8:07pm PST
Lay ကတော့ Exo ရဲ့ Chinese member တွေထဲမှာ ကျန်ရှိနေတဲ့ တစ်ဉီးတည်းသော Chinese Member တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ Lay ဟာ EXO အဖွဲ့ဝင် Lay မဖြစ်လာခင်ကတည်းက ကလေးသရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်လို့ Cele ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်ပေမယ့် EXO အဖွဲ့ဝင် Lay ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက် တရုတ်နိုင်ငံမှာ Solo Artist အနေနဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ဆောင်တော့ ပိုပြီးတောင်အောင်မြင်လာခဲ့ပါတယ်။ Lay ရဲ့ Solo Albulm ဖြစ်တဲ့ “I Need U” ဟာဆိုရင် Billboard’s China မှာ နံပါတ် ၁ နေရာကိုရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင် release လုပ်ပြီး ၂ နာရီအကြာ နိုင်ငံပေါင်း ၁၀ နိုင်ငံရဲ့ iTunes မှာ နံပါတ် ၁ နေရာကို ရယူထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေအပြင် စူပါမင်းသားကြီး Jackie Chan နဲ့အတူ သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ “Goosebump” မှာ ဆိုရင်လည်း Lay ရဲ့ သရုပ်ဆောင် Skill တွေအပြင် Dancing Skill တွေကိုပါတွေမြင်ခဲ့ကြရမှာပါ။ ပြီးတော့ များစွာသော Chinese Variety Show တွေမှာပါ ပါဝင်ခဲ့ပြီး Variety King လို့တင်စားရလောက်အောင်ကို အောင်မြင်လာခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အောင်မြင်နေတဲ့ Idol တွေမွေးထုတ်ပေးမယ့် program တစ်ခုဖြစ်တဲ့ “Idol Producer” မှာဆိုရင်လည်း Nation’s Producer အဖြစ် တာဝန်ယူထားပါတယ်။
A post shared by Zhangyixing (@zyxzjs) on Aug 11, 2017 at 4:01am PDT
EXO ရဲ့ Chinese member တစ်ဉီးဖြစ်တဲ့ Luhan ဟာဆိုရင်လည်း EXO ရဲ့ Luhan အဖြစ်သာမက SM Entertainment ကနေထွက်ခွာပြီးနောက် တရုတ်မှာ Solo Artist တစ်ယောက်အနေနဲ့လည်း အောင်မြင်နေတဲ့ အဆိုတော်ဖြစ်ပါတယ်။ China National Radio ကရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ “6th Most Popular Entertainment Star in China” စာရင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ Forbes China Celebrity 100 ကဖော်ပြတဲ့ “Highest-Paid Celebrity” စာရင်းထဲမှာဆိုရင် ဝါရင့်သရုပ်ဆောင် Fan Bingbing ပြီးရင် ဒုတိယနေရာမှာ ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ Artist တစ်ယောက်ဖြစ်လာတဲ့အထိကို အောင်မြင်လာခဲ့ပါတယ်။ Luhan က အဆိုတော်တစ်ယောက်အနေနဲ့အောင်မြင်ရုံသာမက သူသရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ “Fighter of the Destiny ” ဆိုတဲ့ Chinese Drama ဟာဆိုရင်လည်း 2017 ရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံး Chinese Drama တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
5. Tao (EXO)
Kris နဲ့ Luhan တို့လိုပဲ Solo အဖြစ်နဲ့ အောင်မြင်နေတဲ့ EXO-M ရဲ့ အငယ်ဆုံး Member rapper လေး Tao ဟာဆိုရင်လည်း SM ကနေ ထွက်ခွာပြီးနောက် တရုတ်နိုင်ငံမှာ Solo Artist အနေနဲ့ ဆက်လက်အောင်မြင်လာတဲ့ Celebrity တစ်ဉီးဖြစ်ပါတယ်။ Tao ကလည်း အဆိုတော်အဖြစ်သာမက သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ များစွာသော Drama တွေ Movies တွေမှာပါ သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ လက်ရှိပြသနေဆဲဖြစ်တဲ့ Tao သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ “The Negotiator” ဟာဆိုရင်လည်း အပြိုင်အဆိုင်တွေနဲ့ အောင်မြင်ဖို့ ခဲယဉ်းတဲ့ Chinese Dama Series တွေထဲမှာမှ လက်ရှိ တရုတ်နိုင်ငံမှာ လူကြည့်အများဆုံး Drama Series အဖြစ်နေရာယူထားတဲ့ Drama တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
A post shared by Z.TAO?黄子韬 (@hztttao) on Nov 29, 2017 at 7:17am PST
6. Jackson (Got 7)
JYP Entertainment ရဲ့ Idol Group တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Got7ရဲ့ Member တစ်ဉီးဖြစ်တဲ့ Jackson ဟာဆိုရင်လည်း JYP Enertainment ရဲ့ကိုယ်စား China Activities တွေကို လုပ်ဆောင်ရင်း Solo Album တွေနဲ့အတူ တရုတ်နိုင်ငံမှာပါ အောင်မြင်လာတဲ့ Idol တစ်ဉီးဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာ လှုပ်ရှားမှုတွေအပြင် “Hong Kong Tourism“ ရဲ့ Ambassador အဖြစ်လည်း ခန့်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရပါသေးတယ်။ Jackson ရဲ့ Dancing Skill နဲ့ ဘာသာစကား ၆ မျိုးလောက်တတ်တဲ့ Jackson ရဲ့ Skill တွေကတော့ လုံးဝကို Amazing ပါပဲ။ လက်ရှိမှာတော့ Lay (EX0) နဲ့အတူ “Idol Producer“ မှာ Cast member, Rap mentor အဖြစ် ပါဝင်ထားပါတယ်။
Victoria က China မှာ Idol တစ်ယောက်အနေနဲ့မဟုတ်ပဲ သူမရဲ့ သရုပ်ဆောင် Skill တွေနဲ့အတူ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်၊ Model တစ်ယောက်အနေနဲ့ အောင်မြင်နေတဲ့ Super Star တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာဆိုရင်လည်း များစွာသော K-Pop Idol တွေထဲမှာမှ Fan တွေအချစ်ခံရဆုံး Idol တွေထဲက တစ်ယောက်ပါတဲ့။
JYP Enertainment ရဲ့ Girl Idol Group တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Miss A ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဉီးဖြစ်တဲ့ Fei ဟာဆိုရင်လည်း Idol တစ်ယောက်အဖြစ်သာမက သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်အနေနဲ့ပါ အောင်မြင်နေတဲ့ Idol တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ Miss A မှာ Chinese Member နှစ်ယောက်ပါဝင်ပေမယ့် Fei ကို တော့ တရုတ် Fan တွေ အချစ်ဆုံးပါတဲ့။
A post shared by missa_fei xi (@ff0427) on Sep 23, 2016 at 12:02am PDT
SEVENTEEN ကတော့ Global Idol Group လို့ဆိုတဲ့အတိုင်း နိုင်ငံအသီးသီးက Idol အစုံပါဝင်တဲ့ Group တစ်ခုပါ။ အဲဒီထဲမှာမှ Chinese Member တစ်ဉီးဖြစ်တဲ့ Jun ဟာဆိုရင် Idol မဖြစ်ခင် အသက် ၃ နှစ်အရွယ်ကတည်းက ကလေးသရုပ်ဆောင်အဖြစ်ရပ်တည်လာခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဉီးဖြစ်ပါတယ်။ Jun ရဲ့ role model တွေ က Zhoumi နဲ့ Henry ပါတဲ့၊ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ Jun ကZhoumi နဲ့ Henry တို့လို တရုတ် Fan တွေရော ကိုရီးယား fan တွေဆီကပါ အများကြီးချစ်တာခံချင်လို့ပါတဲ့။
A post shared by SEVENTEEN (@saythename_17) on Jan 27, 2018 at 7:00am PST
10. Kyulkyung (IOI)
အသက် ၁၉ နှစ်သာရှိသေးတဲ့ “Produce 101” မှာ နံပါတ် ၆ ရရှိခဲ့ပြီး IOI member တစ်ဉီးဖြစ်လာခဲ့တဲ့ Kyulkyung ဟာဆိုရင် ‘Produce 101’ ရဲ့ “China’s Miracle” ဆိုတဲ့ nickname ပါရရှိခဲ့တဲ့ Chinese Superstar တစ်ဉီးပါ။ China’s Miracle လို့ဘာလို့တင်စားရလဲလို့ဆိုရင် သူမဟာ တကယ် Skillful ဖြစ်တဲ့ Idol တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင် သူမရဲ့ ကောင်းမွန်လှတဲ့ personality ကလည်း သူမကို ပရိတ်သတ်တွေအချစ်ခံရဖို့ ဖြစ်လာစေခဲ့တာပါတဲ့။ လက်ရှိမှာတော့ သူမက Got7– Jackson , EXO- Lay တို့နဲ့အတူ “Produce 101“ Chinese Version ဖြစ်တဲ့ Idol Producer မှာ mentor အဖြစ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
A post shared by Pristin Kyulkyung | 주결경 | 周洁琼 (@kyulkyungpledis) on Feb 12, 2018 at 12:15pm PST
ကဲ.. ဒီ Idol ၁၀ ယောက်ထဲမှာ ကိုယ့် Bias တွေရောပါကြရဲ့လား ?? ?
PREVIOUS POST Previous post: A Pink အဖွဲ့ ဧပြီလမှာ သီချင်းအသစ်တစ်ပုဒ်နဲ့အတူ ပရိသတ်ကြီးရှေ့မှောက် ပြန်လည်ရောက်လာဖို့ရှိနေ
NEXT POST Next post: ‘It’s Dangerous Beyond The Blankets’ ဆိုတဲ့ Variety Program တစ်ခုမှာ အတူတူမြင်တွေ့ရဉီးမယ့် IKon ရဲ့ Junhoe နဲ့ Wanna one ရဲ့ Kang Daniel
One Reply to “K-Pop Idol အဖြစ်အောင်မြင်လာခဲ့ပြီးနောက် မိခင်နိုင်ငံမှာလည်း မထင်မှတ်ထားလောက်အောင် အောင်မြင်လာကြတဲ့ Idol ၁၀ ယောက်”
Kris , Lay , LuHan & Tao